Kozio ahy : Fahaleovantena - Studio Sifaka - Actu, musique, conseils et débats pour les jeunes à Madagascar
Des jeunes célébraient la fête de l'indépendance à Mahamasina.
Kozio ahy : Fahaleovantena
26 juin : Jour de célébration de l'anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Mais que signifie ce mot indépendance pour les jeunes ?
26 jona : fankalazana ny faha 60 taona niverenan'ny fahaleovanten'i Madagasikara. Fa mba fantatry ny tanora marina ve ny tena dikan’io teny hoe « Fahaleovantena » io. Efa ho 60 taona no nahaleo tena isika ry tanora. Aza variana, ampiasao ny hery sy fahaizanao dieny izao hampisehoana izany fitiavan-tanindrazana, mahaleotena, izany.
Studio Sifaka · 2020 - 06 - 26 Fandaharana Kozio Ahy -FAHALEOVANTENA-